Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka oo Kulan Xaga Isgaadhsiinta ah Kuwada Kulmay Qodobo Muhiim Ahna Kawada Arinsaday.
Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka oo Kulan Xaga Isgaadhsiinta ah Kuwada Kulmay Qodobo Muhiim Ahna Kawada Arinsaday.
Posted by ONA Admin	/ September 22, 2014
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 21/9/2014, kulan dhawr saacadood socday oo xaga isgaadhsiinta casriga ah (Tell Conference) iskugu yimid Madaxa iyo Hawlwadeenada kaladuwan ee Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka ee marka lasoo gaabiyo looyaqaano (HAAU) uu kakooban yahay. Kulankan ooy kasoo wada qaybgaleen dhamaan waaxaha iyo qaybaha kala duwan ee Hogaanka HAAU sida Ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU ayaa lagu falanqeeyay sibalaadhana looga wada arinsaday qodobo muhiim u ah geedi socodka waxqabadka Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee dunida dacaladeeda kahawlgala.
Kulankan ay shalay wada qaateen Madaxda HAAU ayaa ujeedadii oogu waynayd ee loosoo agaasimay ay ahayd kala warqaadasho kusaabsan qorsheyaashii hogaanka horaan oogu dajisnaa iyo kuwa mustaqbalka dhaw laqorshaynayo hirgalintoodu iyo kamido dhalintooda haduu Alaha awooda lihi raali ka’ahaado. Kulankan oo kamid ah kulamadii joogtada ahaa ee Madaxda HAAU ay iskugu imaan jireen ayaa aad loogu falanqeeyay looguna lafoguray guulihii uu Hogaanka HAAU gaadhay bilihii lasoo dhaafay taasoo aan lawada socono wacdarihii ay Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ooysan kamaqnayn urur waynaha OYSU iyo Ururada hooyooyinka Somalida Ogadenya oo iskaashanaya ay kasoo hoyiyeen xuskii sanad guurada 30 aad ee kasoo wareegtay aas aaska Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya.
Jaaliyaadka Ogadenya ee wadanka dibadiisa kudhaqan ayaa muujiyay bisayl, midnimo, khibrad iyo abaabul aad uheer sareeya oo aduunka dacaladiisa sibalaadhan looga xusay munaasabada sanad guurada 30-aad Jabhada ONLF. Waxaa xusid mudan ooguna muhiimsanaa guulaha uu Hogaanka HAAU gaadhay shirkii 19-aad ee Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ay sanadkiiba mar qaban jireen kaasoo todobaadkii lasoo dhaafay lagu soo gabagabeey caasimada wadanka UK ee London. Shirkan jaaliyaadka ayaa kusoo beegmay xilli uu Halganka ay jabhada ONLF hormuudka utahay ee shacabka Somalida Ogadenya oogu jiro siduu ooga hoos bixi lahaa Gumaysiga daalan ee Wayaanuhu majaraha uhayo meel wanaagsan oo lagu naaloon karo uugaadhay taasoo maanta loodabaal dagayo sanad guuradiisii 30-aad.
Qodobadii kulankan sida aadka ah loogu falanqeeyay ayaa waxaa kamid ahaa Abaabulka iyo Hirgalinta shirwaynaha Haweenka Somalida Ogadenya oo laqorshaynayo in laqabto haduu eebuhu yiraahdo bisha December ee dhamaadka sanadkan aan kujirro, shirwaynaha Haweenka Ogadenya ayaa lagu qaban doonaa caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen. Kulankan ayaa kusoo beegmay xilli uu wado Hogaanka oogu sareeya ee JWXO abaabul balaadhan oo kusaabsan balaadhinta iyo hirgalinta hawlaha halganka ee kasocda shanta qaaradood ee aduunka.
Dhanka kale waxaa siqoto dheer leh loogu falanqeeyay aadna looga wada dooday xaalada cusub ee maanta soo foodsaartay Gumaysiga gabalkiisu dhacay ee Wayaanahu hormuudka uyahay ee ka,arimiya Itoobiya. Marxaladan cusub ee Wayaanuhu kujiro ayay lagama maarmaan noqotay in Madaxda JWXO ay dardargalin iyo abaabul xoogan oogu jiraan sidii loohanan lahaa xoriyada uu shacbiga Somalida Ogadenya mudada dheer oogu jiray hanashadeeda. Marxaladan oo ubaahan in shacabka Ogadenya uu siwadajir ah iskaga kaashado sidii Wayaanaha looga xorayn lahaa dalka Ogadenya. Kulamada noocan oo kale ah eey iskugu yimaadaan Madaxa HAAU ayaa lafdhabar u ah dardar galinta iyo kamidho dhalinta hawle halgameedka uyaala Hogaanka HAAU kaasoo siwanaagsan ooga socda dhamaan xarumaha ay kahawlgalaan Jaaliyaadka Somalida Ogadenya oo maanta ilays unoqday isla markaana dhidibada u aasay midnimada iyo wada shaqaynta hay’adaha kala duwan jabhada ONLF.